Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Nissan ကားကို Android 4.4 ကား DVD, Nissan ကားကို Android 4.2 ကား DVD ၏တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD,Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD,Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD,Nissan ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Nissan Tenna 2019 အတွက် Android Car audio GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
cx-3 2018 2020 အတွက် Android ကားမျက်နှာပြင်ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
JUKE 2016 အတွက် GPS နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၀.၁ လက်မ Touch Screen Nissan Morano ကားကစားစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Teana Sylphy 2019 2020 Android Car Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Nissan Micra 2010-2015 အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၂၀၁၂ 2020 Tenna Sylphy အတွက် Android ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Nissan Tenna Sylphy အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Qashqai 2014 အတွက် Android auto radio stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Navara 2016 လက်ဝဲအတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်၏ ဦး ခေါင်းယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sylphy 2015 နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 တွင် Qashqai အတွက်နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Navara 2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tenna 2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက် din ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD 2016 qashqai  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 Navara များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Navara 2016 ညာကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sylphy 2012-2015 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SYLPHY B17 Sentra များအတွက်အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
QashQai X-Trail 2014 dash မာလ်တီမီဒီယာအတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Nissan Tenna 2019 အတွက် Android Car audio GPS
Tenna / Sylphy 2019-2020 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE system, 4GB RAM အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; မျက်နှာပြင် resolution:...
cx-3 2018 2020 အတွက် Android ကားမျက်နှာပြင်ရေဒီယို
Mazda CX-3 2018 2019 2020 အတွက် Android ကားရေဒီယိုစတီရီယို ၁။ Android 10.0 MAZDA CX-3 208 2019 2020 မော်ဒယ်အတွက်ကားသွားလာမှု - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ။...
JUKE 2016 အတွက် GPS နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
JUKE 2014-2016 အတွက် GPS နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာစနစ် JUKE အတွက် ၈ လက်မကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်သည် android 9.0 စနစ်ရှိသော Nissan ကားများအတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ GPS စနစ်ဖြင့်ဂြိုဟ်တုသွားလာမှုသည်အောက်ဖော်ပြပါအရေးကြီးသောအချက် ၄ ချက်ပါ ၀...
Multimedia2din android Qashqai အတွက် 2013-2015 Qashqai အတွက် multimedia2din android ကို ထည့်သွင်းပြီးချိန်တွင် ၁ စက္ကန့်သာ ကြာသော်လည်း အခြားသူများကစက္ကန့် ၃၀ ခန့်ကြာမည်။ ဒီယူနစ် multimedia2din android Qashqai အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် Android 10...
၁၀.၁ လက်မ Touch Screen Nissan Morano ကားကစားစက်
ထုပ်ပိုး: 26.5 * 26 * 18.5CM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
၁၀.၁ လက်မ Touch Screen Nissan Morano ကား DVD စက် 10.1 လက်မ touch screen Nissan ကား Morano ကားကို DVD များအတွက် android ကားတစ်စီး DVD ကို၏ 1. T ကသူ CPU Player ကိုပိုမိုအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်, Quad core ကို Rockchip 3188 Cortex A9 ဖြစ်ပါတယ်။...
Nissan Teana Sylphy Altima 2019-2020 အတွက် Android ကားသွားလာမှု Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency:...
Nissan Micra 2010-2015 အတွက် Android ကား DVD player
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 230 - 250 / Set/Sets
Nissan Micra 2010-2015 အတွက် Android ကား DVD player OS: Android 9
၂၀၁၂ 2020 Tenna Sylphy အတွက် Android ကားရေဒီယို
၂၀၁၂ 2020 Tenna Sylphy အတွက် Android ကားရေဒီယိုစတီရီယို ၁။ Android 9.0 Tenna Sylphy 2019-2020 မော်ဒယ်အတွက်ကားသွားလာမှု။ - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ။...
Nissan Tenna Sylphy အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Qashqai 2014 အတွက် Android auto radio stereo
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM၊ အသုံးချဆော့ဝဲလ်များအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမြန်နှုန်း။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in...
Navara 2016 လက်ဝဲအတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်၏ ဦး ခေါင်းယူနစ်
Navara 2016 လက်ဝဲအတွက် Klyde မော်တော်ယာဉ်၏ ဦး ခေါင်းယူနစ် ဤယူနစ်တွင် Car audio navigation system သည် Fast-boot ကိုထောက်ပံ့သည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ဒီစက်ဒုတိယအချိန်မှစ။ Boot တက်ပြီးအောင် 1 စက္ကန့်ခန့်သာလိုအပ်သည်။ (အခြားစက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စက္ကန့်...
Sylphy 2015 နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား
Sylphy 2015 နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော fluency၊ လိုက်ဖက်မှုနှင့် privacy တို့ပါဝင်သည်။ သင်သည်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော startup အမြန်နှုန်း၊...
2016 တွင် Qashqai အတွက်နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား
2016 တွင် Qashqai အတွက်နှစ်ဆ din DVD ကစားသမား နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 ကားစတီရီယိုစနစ်၊ Plash & Play Qashqai AT Car Radio နှင့် Gps ပါ ၀ င်သည်။ APPs များပိုမိုတပ်ဆင်ရန်အတွက် 4GB RAM နှင့် Octa Core CPU၊ 32GB ROM...
Navara 2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android
Navara 2016 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android 1, DAB: ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက်က Short, အသံလွှင့်ရေဒီယို station တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုနည်းပညာအဖြစ် DAB ်ရောက်စွက်ဖက်ပြဿနာတွေနဲ့ signal ကိုဆူညံသံလျော့ချပေးဖို့ features...
Tenna 2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 26.5 * 26 * 18.5CM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Supply နိုင်ခြင်း: 350000pieces/year
Tenna 2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 1. Tenna 2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်, ဒီကားကို DVD ကိုအဓိကအား Tenna 2015.With ပုံရိပ် function ကိုအတွက်အသုံးပြု 10.1 လက်မ deckless, ထိခလုတ်, ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်လည်ပတ်,...
နှစ်ချက် din ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD 2016 qashqai
နှစ်ချက် din ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD 2016 qashqai 1. နောက်ဆုံးရကို Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, Android ဖုန်းများအတွက်အသိဉာဏ်စကားသံကိုလက်ထောက် (ဂူးဂဲလ်လက်ထောက်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်) .high...
2016 Navara များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကားတစ်စီးစတီရီယို
2016 Navara များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကားတစ်စီးစတီရီယို ကားများအဘို့ကား 1.P ortable DVD system ကို 2016 Navara များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကားတစ်စီးစတီရီယိုသာမန်သူမြားကိုနှိုငျးယှဉျအရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း, ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု shrank...
Navara 2016 ညာကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
Navara 2016 ညာကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 1. ဒီမော်ဒယ်များ၏အရည်အသွေးကို: Navara 2016 ညာကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် , ရောင်းဖို့စတင်မတိုင်မီအကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်,...
Sylphy 2012-2015 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
Sylphy 2012-2015 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်, Klyde ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, တူရကီ, GCC နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား,...
SYLPHY B17 Sentra များအတွက်အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီးရေဒီယို
SYLPHY B17 Sentra များအတွက်အညွှန်းနှင့်အတူအန်းဒရွိုက် 8.0 PX5 ကားတစ်စီးရေဒီယို Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip Processor...
QashQai X-Trail 2014 dash မာလ်တီမီဒီယာအတွက်
QashQai X-Trail 2014 dash မာလ်တီမီဒီယာအတွက် Android ကို 8.0 PX5 Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip Processor...
တရုတ်နိုင်ငံ Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
နောက်ဆုံးပေါ်ဟာ android 6.0 စနစ်က: android 6.0 ၏ optimized မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်များနှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၏ system ကိုမကြုံစဖူးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုအဆင့်အထိယူဆောင်ခဲ့သည်။
သငျသညျဝဘ် browsing စဉ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းစာရင်းများ engjoy, ဒါမှမဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့အဆိုပါ lastest ပြိုင်ကားဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။
Google ကမြေပုံ, Youtube ကိုနှင့် Facebook အပါအဝင် android system ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းမြောက်မြားစွာ applications များ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ အွန်လိုင်းကိုနားထောင်, အနီးအနားဈေးအပေါဆုံးဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုရှာပါ
ရေဒီယို, ကို TED, ပန်ဒိုရာပြောသွားနှင့်အများကြီးပို။
သငျသညျ Nissan ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Nissan ကားကို Android 4.4 ကား DVD, Nissan ကားကို Android 4.2 ကား DVD တရုတ်နိုင်ငံ, Nissan ကားကို Android 5.1 ကား DVD ၏ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ပေးသွင်း & ထုတ်လုပ်သူကိုရှာရှိလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Nissan ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD Nissan ကအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD Nissan ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD